Bit By Bit - Ethics - 6.6.4 Go'aanno ka qaadashada in wejiga la hubin
Lama hubo ma keeni baahan in ficil.
Qaybta afaraad iyo kan ugu dambeeya ee aan filayo in cilmi-baarayaashu ay halgan yihiin ayaa go'aan ka gaari doona wajiga aan la hubin. Taasi waa, ka dib dhammaan falsafadeynta iyo isu dheelli-tiridda, anshaxa cilmi-baarista waxaa ka mid ah sameynta go'aano ku saabsan waxa la qabanayo iyo waxa aan la samayn. Nasiib daro, go'aammadan inta badan waa in lagu sameeyaa iyada oo ku saleysan macluumaadka dhamaystiran. Tusaale ahaan, marka la naqshadeeyo Encore, cilmi-baarayaashu waxay u rajayn jireen inay ogaadaan itimaalka ay u keeni karto qof uu booliisku soo booqanayo. Ama, marka la qorsheynayo Fikradaha Dareenka, cilmi-baarayaasha ayaa laga yaabaa inay rajeynayaan inay ogaadaan itimaalka ah inuu kicin karo niyad-jabka ka-qaybgalayaasha qaarkood. Maqnaanshahaani waxay ahaayeen kuwo aad u hooseeya, laakiin looma ogeyn ka hor inta cilmi-baaristu socoto. Iyo, sababtoo ah mashruucan si toos ah loola socodsiiyo munaasabadaha qusaysa, munaasabadahaas weli wali lama yaqaan.
Hubin la'aanta maaha mid u gaar ah cilmi baarista bulshada ee da'da digital. Marka warbixinta Belmont ay qeexday qiimeynta nidaamsan ee khatarta iyo dheefaha, waxaa si cad u qiray in ay adkaan doonto in la tiriyo si sax ah. Si kastaba ha ahaatee, hubin la'aantaas waxay si aad ah ugu daran yihiin da'da dijitaalka, qayb ahaan sababtoo ah waxaan khibrad u leennahay noocan cilmi baarista ah iyo qayb ahaan sababtoo ah sifooyinka cilmi ahaan laftigeeda.
Marka la eego xaaladdan shakiga ah, dadka qaarkood waxay u muuqdaan inay u doodayaan waxyaabo sida "ka badbadal badan kuwa raali geliya", taas oo ah habka loo yaqaan " Principle Precautionary" . Inkasta oo qaabkani uu u muuqdo mid macquul ah-laga yaabo inuu xitaa xikmad-wuxuu xaqiiqdii keeni karaa waxyeelo waa ku faraxsan tahay in cilmi-baadhis; waxayna u keentaa dadka in ay qaataan aragti xad-dhaaf ah ee xaalada (Sunstein 2005) . Si aad u fahamto dhibaatooyinka Mabaadii'da Digniinaha, bal aynu eegno nacasnimada shucuurta. Tijaabada waxaa loo qorsheeyay in ay ku lug yeelato qiyaastii 700,000 oo qof, waxaana hubaal ah inay jiraan fursado ay dadku tijaabinayaan waxyeelo. Laakiin waxaa kale oo jiray fursad ah in tijaabadu ay soo saari karto aqoonta faa'iido u leh isticmaalaha Facebook iyo bulshada. Sidaa darteed, inta ay u oggolaan lahayd tijaabadu inay ahayd khatar (sida loo baddalay), ka hortagga tijaabadu waxay sidoo kale noqon kartaa khatar, sababtoo ah waxay abuuri lahayd aqoon qiimo leh. Dabcan, doorashadu ma ahan mid u dhexeeya samaynta tijaabada maaddaama ay dhacday oo aan sameynin tijaabinta; waxaa jiray isbaddallo badan oo suurtagal ah in la sameeyo qaabka laga yaabo inay keeneen miisaaniyad ka duwan kuwa kale. Si kastaba ha noqotee, mararka qaar, cilmi baarayaashu waxay yeelan doonaan ikhtiyaarka u dhexeeya samaynta daraasad aanna sameynin, waxaana jira halis labada ficil iyo waxqabadka labadaba. Waa mid aan habooneyn inaad diirada saarto halista ficilka. Si fudud, ma jirto qaab khatar la'aan ah.
Ka gudubka Xeerka Aasaasiga ah, habka ugu muhiimsan ee looga fekerayo go'aan qaadashada la siiyey hubin la'aantu waa heerka ugu hooseeya halista . Heerkani waxa uu isku dayayaa in uu qiyaaso halista daraasad gaar ah oo ka dhan ah khatarta ka imaaneysa ka qaybgalayaashooda nolol maalmeedkooda, sida ciyaaraha isboortiska iyo baabuurta wadista (Wendler et al. 2005) . Habkani waa mid qiimo leh sababta oo ah qiimeynta haddii wax la kulmo heerka halista yar waa sahlan marka la qiimeeyo heerka dhabta ah ee khatarta. Tusaale ahaan, Falanqaynta Dareenka, ka hor inta aan la bilaabin daraasaddan, cilmi-baarayaashu waxay isbarbar dhigi lahaayeen nuxurkii dareenka ee wargeysyada ku saabsan tijaabooyinka kale ee la adeegsado Facebook. Haddii ay isku mid ahaayeen, markaa cilmi-baarayaashu waxay soo gabagaboobi lahaayeen in tijaabadu la kulanto heerka halista yar (MN Meyer 2015) . Waxay go'aan ka gaari karaan xataa haddii aysan garanayn heerka khatarta ah ee khatarta ah . Habkaas ayaa loo isticmaali karaa Encore. Ugu horreyn, Ku dhiirigeli codsiyada kiciya ee boggaga internetka ee lagu yaqaan inay tahay mid xasaasi ah, sida kuwa ka mamnuucaya kooxaha siyaasadeed ee waddamada leh cadaadis dawladeed. Sidaa darted, khatarta ugu yar ee ka iman karta kaqaybqaatayaasha dalalka qaarkood. Si kastaba ha ahaatee, version of Encore-oo kaliya oo kiciyay codsiyada Twitter, Facebook, iyo YouTube-wuxuu ahaa halis yar sababtoo ah codsiyada goobahaas ayaa kiciyay inta websaytka caadiga ah (Narayanan and Zevenbergen 2015) .
Fikradda labaad ee muhiimka ah marka go'aan laga gaadho daraasadaha khatarta aan la garanayn ayaa ah falanqaynta awooda , taas oo u oggolaanaysa cilmi-baarayaasha in ay xisaabiyaan cabbirka saamiga oo ay u baahan doonaan inay si sax ah u ogaadaan saamiga cabbirka la sameeyay (Cohen 1988) . Haddii daraasaddaadu ay dhici karto inay ka-qaybgalayaashu khatar galiso-xitaa halista ugu yar-markaa mabda'a faa'idada leh waxay ku talineysaa inaad ku soo rogto qadarka ugu yar ee khatarta loo baahan yahay si loo gaaro himilooyinkaaga cilmi-baarista. (Ka fikir mabda'a yaraynta cutubka 4.) Inkasta oo cilmi-baarayaasha qaar ay haystaan ​​caqabad ay ka dhigayaan in ay waxbarashadooda ugu ballaadhaan , suurtogalka cilmi-baadhisku waxa uu soo jeedinayaa in cilmi-baadhayaashu ay tahay in ay waxbarashadoodu yar yihiin sida ugu macquulsan. Falanqaynta awooda maaha mid cusub, dabcan, laakiin farqi u dhaxeeya habka loo adeegsaday da'da analogga iyo sida loo isticmaalo maanta. In da'da analooga, cilmi baarayaashu guud ahaan waxay sameeyeen falanqayn awoodeed si loo hubiyo in daraasaddoodu aysan aheyn mid aad u yar (ie, hoos-u-taakuleyn). Hadda, si kastaba ha ahaatee, cilmi-baarayaashu waa inay sameeyaan falanqayn awoodeed si ay u hubiyaan in daraasaddoodu aysan ahayn mid aad u weyn (sida, kororka).
Heerka khatarta ugu yar iyo falanqaynta awoodda waxay kaa caawineysaa inaad ka fikirto oo aad diyaarsato daraasado, laakiin kuma siinayaan macluumaad kasta oo ku saabsan sida kaqaybgalayaashu ay u dareemaan daraasaddaada iyo khatarta laga yaabo inay ka soo qeyb galaan. Hab kale oo loola macaamilo hubin la'aantu waxay tahay in la ururiyo macluumaad dheeraad ah, taas oo keenaysa baaritaanno anshax-raadin ah iyo tijaabooyin tijaabo ah.
In sahan anshax-jawaab, cilmi bandhigi sharaxaad kooban ee mashruuca a cilmi jeediyay ka dibna weydii labo su'aalood:
(Q1) "Haddii cid kale oo aad daryeeli ku saabsan ahaayeen qaybgale musharax tijaabo this a, aad rabto in aad qofka in lagu daro sida qaybgale ah?", [Haa], [anigu ma door bidaan], [No]
(Q2) "Ha aad aaminsan tahay in cilmi loo oggolaado in ay ku talaabsato tijaabiyaan this?", [Haa], [Haa, laakiin si taxadir leh], [Ma hubo], [No]
Ka dib su'aal kasta, jawaab-celiyeyaasha waxaa la siiyaa meel ay ku sharxi karaan jawaabtooda. Ugu dambeyntii, jawaabeyaasha - kuwaas oo noqon kara kaqeybgalayaasha ama dadka ka shaqeeya suuqyada xoogsiga macaamiisha (tusaale ahaan, Amazon Mechanical Turk) -waxbarashada su'aalaha aasaasiga ah ee dadweynaha (Schechter and Bravo-Lillo 2014) .
Sahaminta anshaxa-ku-salaysan waxay leeyihiin saddex sifooyin oo aan helayo gaar ahaan soo jiidasho leh. Marka hore, waxay dhacaan ka hor inta aan la sameynin daraasad, sidaas darteed waxay ka hortagi karaan dhibaatooyinka ka hor inta cilmi-baaristu bilaabmayso (marka laga reebo in ay la socdaan kormeeraha falcelinta xun). Marka labaad, jawaabeyaasha ku jira baaritaanka anshaxa-ku-salaysan ayaa ah kuwa aan ahayn cilmi-baarayaal, sidaas darteedna waxay taasi ka caawisaa cilmi-baarayaasha in ay daraasaddooda ka eegaan aragtida dadweynaha. Ugu dambeyntii, sahano anshax-jawaab ah ayaa u suurtageliya cilmi-baarayaasha in ay soo saaraan qaybo badan oo ka mid ah mashruuc cilmi baaris ah si loo qiimeeyo isu-dheelitirka anshaxa ee kala-duwanaanta qaybaha kala duwan ee isla mashruucaas. Hal-xaddidaad, si kastaba ha ahaatee, baaritaano anshax-jawaab ah ayaa ah inaanay cadayn sida loo go'aamiyo ujeedooyinka cilmi-baarista ee la bixiyay natiijooyinka sahanka. Hase yeeshe, inkastoo xaddidaadahan, baaritaanno anshax-raadin ah ayaa u muuqda inay caawinaan; Xaqiiqdii, Schechter and Bravo-Lillo (2014) ayaa ka tagay daraasad qorshaysan iyada oo ka jawaabeysa welwelka ay soo saareen kaqaybgalayaashu si sahlan uga jawaabaan.
In kasta oo sahano anshax-jawaab ah ay ku caawin karaan qiimeynta falcelinta daraasadda la soo jeediyey, ma qiyaasi karaan astaamaha ama darnaanta dhacdooyinka xun. Hal dariiqo oo ay cilmi-baarayaasha caafimaadku ka qabtaan hubin la'aanta goobaha khatarta sare leh waa inay sameeyaan tijaabooyinka marxaladda- habka laga yaabo inay gacan ka geystaan ​​cilmibaarista bulsheed. Marka ay tijaabinayaan waxtarka daroogada cusub, cilmi-baarayaashu isla markiiba ma boodaan tijaabo caafimaad oo balaaran. Taas bedelkeeda, waxay bilaabaan laba nooc oo daraasado ah marka hore. Marka hore, marxaladda tijaabada ah, cilmi baarayaasha ayaa si gaar ah diirada u saaran helitaanka qiyaas amar ah, iyo daraasadahani waxay ku lug leeyihiin tiro yar oo dad ah. Marka qiyaasta nabdoon ee la go'aamiyo, wajiga IIaadku wuxuu qiimeeyaa saamaynta daroogada; taas oo ah, awoodda ay u leedahay in ay ka shaqeyso xaalada ugu wanaagsan (Singal, Higgins, and Waljee 2014) . Diyaargarow kedib marxaladda I iyo II ayaa la dhameeyay waa daroogo cusub oo loo oggol yahay in lagu qiimeeyo maxkamad la xaddiday oo xadidan. Inkasta oo qaabka dhabta ah ee tijaabooyinka loo isticmaalay horumarinta daroogooyinka cusub laga yaabo inaysan ku habboonayn cilmi-baaris bulsheed, marka la wajaho hubin la'aanta, cilmi-baarayaashu waxay kashaqayn karaan daraasado yaryar si gaaban diiradda u saareeya ammaanka iyo waxtarka. Tusaale ahaan, iyadoo Encore, waxaad qiyaasi kartaa cilmi-baarayaasha ka bilaabanaya ka qaybgalayaasha dalalka leh awood sharci oo xoog leh.
Wadajir ahaan, afartan qaabab: heerarka ugu hooseeya khatarta, falanqaynta awooda, baaritaano anshaxeed, iyo tijaabooyin tijaabo ah - ayaa kaa caawin kara inaad sii wadato hab macquul ah, xitaa marka la eego dhinaca hubaal la'aanta. Hubin la'aantu waxay ubaahan tahay in ay keento waxqabasho la'aan.